Xukumadda oo cadaadis ku saareysa degmooyinka qaabilaada qaxootiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Erik Ullenhag, wasiirka is-dhex-galka. Foto: Bertil Enevåg Ericson/Scanpix
Xukumadda oo cadaadis ku saareysa degmooyinka qaabilaada qaxootiga
Gunnar Herberg: Howl xiiso leh ayaa naloo direy
La daabacay måndag 20 januari 2014 kl 13.53
Qaxootiga sharciga deganaansha la siiyey ayeysan boosas ugu banaaneyn degmooyinka dalka. Sidaas owgeed ayey xukumada u magacowdey labo xiriiryaal qaxooti oo booqasho ku tagi doona gu'ga dhaxdiisa degmooyinka dalka, si degmooyinka kuwooda ay yartahey qaxootiga ay qaabileen u badin lahaayeen qaabilaadooda. Howl xiiso leh ayaa naloo direy ayuu yeri Gunnar Hedberg oo xisbiga moderat kamid aha kana kamid ah labadaan xiriiriyaal.
- Waa mid xiiso leh in ruux Moderat ah iyo mid Sochiyaaldemokarat ah isku raacaan booqasho ay ku tagaan degmooyinka si ay ula soo hadlaan. Waa arin aad dhiiro galin u leh ayuu yeri Gunnar Hedberg oo ah moderat ka tirsan barlamaanka waqti dheerna ka soo tirsenaan jirey golaha deegaanka Uppsala iminka xukumada kamid dhigtey guddi labo ruux ka kooban oo xiriirin doona arimha qaabilaada xaqootiga. Mid kale ee guddigan ku jira ayaa ah Lars Stiernkvist oo ka tirsan golaha deeganka Norrköping ahna xubin kamid ah xisbiga Soshiyaaldemokratiga. Labadaan shaqsi oo ah shasiyaad aqoon fiican u leh siyaasada degmoyinka, sida uu yeri Gunnar Hedberg.
- Waxaanahey labadeenuba shaqsiyaad waayo arag u ah siyaasada degmooyinka. Anniga waxaan golaha degmada uppsala ka soo tirsanaa mudo 29 sanno ah. Uguma tageyno sida shaqsiyad dowladda matalaya ee waxaan ugu tageynaa sida shaqsiyaad wax ka yaqaan shaqada culeyska badan ee degmooyinka hayaan, sidaa daraadeed ayaa rajeyneyna in aan kasooni weyn ku heli doon waayo waxaan waayo arag u nahey sida ay degmooyinka u shaqeeyaan , ayuu eri.
Iswiidhen ayaa iminka waxaa soo gaaraya qaxooti badan oo badankooda deganaansho la siiyo. Laakiin madaama boosas looga heynin degmooyin ka ayey ku dhawaad 10 000 oo ruux oo la siiyey sharciga deganaansha weli ugu sugan yahiin xarumahii qaxootiga ee lagu qaabiley oo ay weli ku suganyaan degmadii la dejin lahaa.
Wasiirka is-dhex-dhalka Erik Ullenhag ayaa wargeyska Svenska Dgabladet u sheegey in ay tahay wax laga caroodo in degmooyin ka qaarkood ee suuqooda shaqada wanaagsan yahay ay qaabilaan qaxooti aad u tiro yar kuwaas uu ka magac dhabey Danderyd, Tyresö, Vellinge iyo Kungsbacka. Degmooyinkas oo dhamaantood ah kuwo ay maamulkooda hayaan xisbiga moderatka . Laakiin demooyinka moderatka maamulaan in waxtiridooda qaxootiga ka liidato kuwa kale ayuusan aaminsaneyn Gunnar Hedberg oo asaguba kamid ah xisbiga Moderatka.
- Maya, sidaas ma qabo, balse waxa weeye waxaa laysku dayayaa in la arko dhibaatooyinka loo arko in ay yahiin kuwo saameeya muwaadiniinta. Wadahadelkeena waxaan rajeyneynaa in uu ku siyaadiyo aragtiyo muhiim ah, ayuu yeri.
Wadahalkas waxuu Gunnar Hedberg doonayaa in uu carabka ku adkeeyo isbadelka ay dowladda ku sameysey taageerada qaran ee lagu bixiyo qaabilaada. Taas oo ku sabsan in degmooyinka masuuliyada dheeraadka ah iska saara qaxootiga la siin doono taageero dhaqaale oo ka badan tan la siiyo degmooyinka aan masuuliyad iska saarin qaxootiga. Hadefkeena waxa weeye in aan dhageysano degmooyinka oo aan qancino ayuu yeri Gunnar Hedberg.
- Howlsheena waxaan u arkaa waddo hadal ku sabsan isbadelka ay xukumada ku sameysey hanaanka taageerada qaabilaada qaxootiga in ay noqoto mid miro dhasha, ayuu yeri Gunnar Hedberg oo ah xil-dhibaan barlmaanka uga tirsan xisbiga moderatka oo ah mid kamid ah oo xukumadu u xil-saartey in uu noqdo xiriiriyaha arimaha qaabilaada qaxootiga.